RASMI: Xidig Bartil-Maameed U Ahaa Kooxaha Barcelona & Arsenal Oo Heshiis U Saxiixay Kooxdiisa Iyo Lacagta Heshiiskiisa Cusub Lagu Burburin Karo Oo La Shaaciyay. – Laacib.net
Suuqa kala iibsiga xagaaga ayaa maraya meel xaasaasi ah gaar ahaan horyaalka Premier League oo sanadkan lagu qasbi doono in suuqu xidhmayo isla marka uu xili ciyaareedka cusub ee Premier league furmayo August 11 kadib markii ay dhamaadkii xili ciyaareedkii hore kooxuhu u codeeyeen in la soo horumariyo waqtigii uu suuqa xagaagu xidhmi jiray.
Kooxaha Barcelona iyo Arsenal ayaa doonayay in ay la soo saxiixdaan xidiga xulka qaranka Argentina iyo kooxda Bocca Juniors ee Christian Pavon iyada oo waliba dhawaan uu soo baxay war sheegayay in Lionel Messi uu maamulka kooxdiisa Barca kula taliyay in ay la soo saxiixdaan Christian Pavon laakiin xidigan ayaa hadda qalinka ku duugay heshiis cusub oo waqti dheer ku sii hayn doona Boca Juniors.
Wararkii hore ee sheegayay in Lionel Messi uu maamulka kooxdiisa ku wargaliyay horumarka uu sameeyay Christian Pavon iyo waliba xidhiidhka fiican ee ay garoonka dhexdiisa ku lahaayeen tan iyo markii uu Jorge Sampaoli noqday macalinka Argentina ayaa kooxda Boca Juniors ku qasabtay in ay heshiis cusub la gaadhay Christian Pavon.
Sababta ugu wayn ee ay kooxda ree Argentina ee Boca Juniors heshiiska cusub uga saxiixatay Christian Pavon ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii ay sare ugu qaadi lahayd qiimaha lacageed ee qandaraaskiisa lagu burburin karo oo markii hore aad u hoosaysay marka tayadiisa ciyaareed la barbar dhigo.
Kooxda Arsenal ayaa xiisaynaysay saxiixa da’yarka ree Argentina iyo kooxda Boca Juniors ee Christian Pavon laakiin hadda waxay ku qasban tahay in ay bixiso lacagta heshiiskiisa cusub lagu burburin karo haddii uu Unai Emery doonayo in uu xiisaha kooxdiisa kaga dhabeeyo.
Madax waynaha kooxda Boca Juniors ayaa ku dhawaaqay in ay heshiis cusub ka saxiixdeen Christian Pavon isla markaana ay sare u qaadeen lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo oo hadda laga dhigay 37.5 milyan gini wuxuuna jamaahiirta kooxdiisa Boca Juniors usheegay in ay ku raaxaystaan.
Si kastaba ha ahaatee, Christian Pavon oo ka mid ah ciyaartoyda mustaqbalka wayn ku leh kubbada cagta isla markaana khibrad fiican soo helay intii uu Sampaoli hayay shaqada xulka qaranka Argentina ayaa la filayaa in uu hadda sii joogi doono Boca Juniors haddii ayna kooxaha xiisaynayaan go’aansan in ay lacagta 37.5 milyan giniga ah bixin.